अस्ट्रेलियाली सैनिक अफगानी नागरिक हत्यामा संलग्न – Karnalisandesh
अस्ट्रेलियाली सैनिक अफगानी नागरिक हत्यामा संलग्न
प्रकाशित मितिः ४ मंसिर २०७७, बिहीबार २१:२९ November 19, 2020
काठमाडौँ। अस्ट्रेलियन डिफेन्स फोर्स एडीएफले आफ्ना सैनिकहरूले अफगान युद्धका बेला गरेका दुर्व्यवहारहरूबारे चार वर्ष लगाएर गरेको छानबिनको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ।
सन् २००९ देखि २०१३ सम्म बन्दी, किसान वा गैरसैनिक सर्वसाधारणु को हत्याका घटनामा १९ बहालवाला वा पूर्वसैनिकलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइनुपर्ने एडीएफको निष्कर्ष छ।
केही सैनिकमा देखिएको अनियन्त्रित योद्धा संस्कारुका कारण ती अपराधहरू भएको उसको भनाइ छ। उक्त छानाबिनमा सैन्य न्यायाधीश पल ब्रेरेटनले ४०० भन्दा बढी साक्षीसँग कुरा गरेका थिए।
उक्त छानबिनमा यस्ता घटनाको प्रमाण पनि फेला परेका छन्। कनिष्ठ सैनिकहरूलाई बन्दीलाई गोली हानेर मार्ने अभ्यास गर्न निर्देशन दिइन्थ्यो अस्ट्रेलियाले आफू न्याय सुनिश्चितु गर्न प्रतिबद्ध भएको आश्वासन दिएको अफगानिस्तानले जनाएको छ।
छानबिनले के पत्ता लगायो ?
विभिन्न २३ वटा घटनामा २५ सैनिकहरू प्रत्यक्ष वा सहयोगीका रूपमा गैरकानुनी हत्यामा संलग्न भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। एडीएफका प्रमुख जेनरल एङ्गस क्याप्बेलका अनुसार ती कुनै पनि घटना युद्ध चर्किएका बेला भएको भनेर मान्न सकिँदैन।
घटना हुँदा उनीहरू कोही विषम परिस्थितिमा भएको नदेखिएको क्याप्बेलले बिहीवार संवाददाताहरूलाई बताए। उनका अनुसार स्पेशल एअर सर्भिस (एसएएस) का केही सैनिकले कानुन उल्लङ्घन गरेको पाइएको छ।
“सैन्य गुणलाई दम्भ, वरिष्ठताबोध र अधिकारसँग जोड्न केही अनुभवी, प्रतिभावान् र प्रभावशाली सैनिक र उनीहरूद्वारा संरक्षित व्यक्तिले विकृति अँगालेको र फैलाएको उक्त प्रतिवेदनले देखाउँछ,” उनले भने।
उक्त छानबिन गोप्य रूपमा गरिएको थियो र यसअघि निकै कम जानकारी मात्र उपलब्ध गराइएको थियो। अफगान राष्ट्रपतिको कार्यालयका अनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले फोन गरेर दुःख प्रकट गरेका थिए।
तर अफगानिस्तानले औपचारिक रूपमा कुनै टिप्पणी गरिसकेको छैन। बीबीसीसँग कुरा गर्दै ह्यूमन राईट्स् वाचकी इलेन पीअरसनले “ती अपराधहरू भएका थिए भनेर यो स्वीकारोक्ति हो” भनेकी छन्।
गत साता प्रधानमन्त्री मरिसनले प्रतिवेदनमा भएको विवरणअनुसार कानुनी कारबाही गर्न एक विशेष अनुसन्धानकर्ता नियुक्त गर्ने बताएका थिए। स्थानीय सञ्चारमध्यमका अनुसार मुद्दा चलाउनुअघि प्रहरी अनुसन्धानका लागि वर्षौँ लाग्न सक्छ।
जेनरल क्याम्पबेलका अनुसार एसएएसको एउटा एकाइ बन्द गरिएको छ। सबै कुरा यथोचित रूपमा गर्नु एडीएफको जिम्मेवारी भएको उनको भनाइ छ।सरकारले एडीएफको संरचनाबाहिर उत्तरदायित्व र पारदर्शिताु कायम गर्न एउटा स्वतन्त्र निरीक्षण समिति स्थापना गरिने बताएको छ। अस्ट्रेलियाले अफगानिस्तानमा शान्ति स्थापनार्थ ४०० सैनिक पठाएको छ।
अरू देशलाई कस्तो आरोप?
यो वर्षको आरम्भतिर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत आईसीसीले अमेरिकी र अन्य पक्षले अफगान द्वन्द्वका बेला युद्ध अपराध गरेको आरोपबारे छानबिन थालेको थियो। त्यसअन्तर्गत तालिबान, अफगान सरकार र अमेरिकी सैनिकहरूले सन् २००३ यता गरेका गतिविधिको परीक्षण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
आईसीसीले सन् २०१६ को एउटा प्रतिवेदनमा अमेरिकी सेनाले सीआईएद्वारा सञ्चालित गोप्य स्थानमा बन्दीहरूलाई यातना दिएको पर्याप्त आधार भएको उल्लेख थियो।
अफगान सरकारले पनि बन्दीलाई यातना दिएको र तालिबानले नागरिकहरूको आमहत्या गरेर युद्ध अपराध गरेको ठान्नु युक्तिसङ्गत हुने आईसीसीको भनाइ थियो। यूकेले पनि आफ्ना सैनिकहरू गैरकानुनी हत्यामा संलग्न भएको आरोपबारे राम्ररी अनुसन्धान गरिएको थियो कि थिएन भनेर छानबिन गरिरहेको छ।